एन आई सी एशिया बैंककोे एकैसाथ तीनवटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा - Aathikbazarnews.com एन आई सी एशिया बैंककोे एकैसाथ तीनवटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा -
एन आई सी एशिया बैंककोे एकैसाथ तीनवटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा
बैंकले संचालनमा ल्याएको खुदुनाबारी शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष रघुनाथ खनालले गरेका थिए र उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा खड्ग माया पराजुलीलाई नियुक्त गरिएको छ । यसैगरीे मोग्लाह शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष खुर्सेद आलमले गरेका थिए र उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा जलालुद्दीन मुसलमानलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यस्तै अमरदह शाखारहित बैंकिङ्गसेवाको समुद्घाटन सुनबर्षी नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष टेक बहादुर विष्टले गरेका थिए । अमरदह शाखारहित बैंकिङ सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा योगेन्द्र संग्रौलालाई नियुक्त गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सोधे, ‘रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली घर फर्किदा भन्सारमा सास्ती किन ?’
अब तीन रुपैयाँ हाराहारी सस्तिन्छ डन्डीको मूल्य !